Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Fedaraalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay wehliyaan guddoomiye ku xigeenadda Golaha Aqalka sare ayaa Maanta xarunta Golaha kulan kula yeeshay guddoonadda Golayaasha sharci dejinta dowlad goboleedyada dalka. Kulanka Maanta dhexmaray guddoonka Golaha Aqalka Sare iyo guddoonnada golayaasha sharci dejinta ee dowlad gobaleedyada xubnaha ka ah xukumadda Federaalka (DXDF) waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka Aqalka Sare iyo golayaasha Sharci…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Aarre Sulayman Cowleed, oo ah muwaadin reer Jabuuti ah oo muddo ku noolaa Somaliland, ayaa loo taxaabay xabsiga magaalada Gabilay oo uu ku noolyahay, kadib dhaliilo uu baraha bulshada uga jeediyay madaxweynaha Jabuuti.Aarre oo muuqaal qarsoodi ah iskaga soo duubay gudaha saldhiga booliiska ee Gabilay, ayaa sheegay in aanu garanayn, waxa loosoo xidhay, uuna ka baqanayo in loo gacan galiyo dowlada Jabuuti, wuxuuna shacabka Somaliland ka codsaday in ay bad baadiyaan."Waa Aare Sulayman Cowleed oo…
Midowga Yurub oo Hogaamiya Soomaaliya kala hadlay howlgalkii la hakiyey ee la dagaalanka Burcad baddeeda
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Guddiga sare ee Midowga Yurub ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh kala hadlay howlgalka ATLANTA ee la dagaalanka burcad baddeeda Soomaaliya. Wakiilka sare ee arrimaha dibadda ee Midowga Yurub Josep Borrell, ayaa xiriir uu qadka taleefoonka kula sameeyay madaxweyne Xasan Sheikh, waxaa uu xaqiijiyay inay si faahfaahsan uga wada hadleen howlgalka ATALANTA. Josep Borrell ayaa hoosta ka xariiqay sida ay Midowga Yurub uga go’an tahay in uu bilaabo waa cusub oo iskaashi oo uu la…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Dowladda Itoobiya ayaa xabsiga u taxaabtay Gen. Tefera Mamo oo horey u ahaa Taliyihii Ciidamada degaanka Axmaarada, iyadoo lagu eedeeyay inuu ku dhex jiray falal lid ku ah dowladda Itoobiya. Jeneraalkan ayaa xilliga la qabanayay waxa uu ku sugnaa Addis Ababa, iyadoo la sheegay in sirdoonka Itoobiya ay Addis Ababa kaga qaadeen Hilikobtar kuna geeyeen Bahirdar Caasimadda degaanka Axmaarada, halkaas oo maalinimadii shalay ahayd uu kasoo dhex muuqday maxkamad ku taal magaalada Bahirdar. Jeneraal…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaare badan geystay oo Xalay dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay ku qaadeen Barkoontarool oo ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin duuleedka degnada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in weerarka Al-shabaab ay Xalay ku qaadeen barta koontarool ee ku taala duuleedka degmada ay ku dhinteen lix askari oo ka mid ah ciidanka dowladda ee ku sugnaa bartakoontarool.Dagaalyahanada Shabaab ee weerarka…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Mukhtaar Roobow, Hoggaamiye ku xigeenkii hore ee kooxda Al-Shabaab oo muddo afar sano ah xabsi guri ugu jira hay’adda nabad sugida Soomaaliya ee NISA ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii la xiray Dec 2018, kasoo muuqday warbaahinta.Arrintaan ayaa kusoo aaday, kadib markii uu dalku galay isbeddel siyaasadeed oo cusub islamarkaana ay meesha ka baxday dowladdii soo xirtay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo.Warar ayaa sheegaya in la oggolaaday Mukhtaar Roobow in ay booqasho ugu taagan…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay isbadalka cusub ee dalka ka hirgalay oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo, isagoona xusay in mudo la sugaayay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacay.
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Hay’adda lacagta adduunka ee IMF ayaa waxay ogolaatay in ay kordhiso muddada taageeradeeda dhaqaale ee ay siiso Soomaaliya, kadib doorashadii madaxtinimo ee todobaadkii hore dhacday. Taageerada maaliyaddeed ee IMF oo soo socotay saddexdii sano ee ugu dambeysay, taas oo ahayd $400m, ayaa loo qorsheeyay inay si toos ah u dhacayso 17-ka May haddii aysan Soomaaliya helin dowlad cusub. Todobaadkii hore ayaa guddiga sare ee IMF-ta waxa ay aqbaleen codsigii dowladda Soomaaliya ee ahaa in muddo…
Sabti, May, 21, 2022 (AX) - Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa jiray in dib uu dagaal uga dhex qarxay Soomaalida iyo Canfarta wada dega dalka Itoobiya, dagaalkan ayaa ka socday dhawr goobood oo kamid ah galbeedka gobolka Sitti ee degaanka Soomaalida gaar ahaan magaalooyinka Danlahelay iyo Cundhufo. Khasaaraha ka dhashay dagaalladan ayaa siday wararku sheegayaan waxaa ku naf waayay dhawr qof tiro kalena way ku dhaawacmeen, iyadoo wararkii u dambeeyayna ay sheegayaan inay go'doonsan yihiin shacabka ku dhaqan magaalada…
Jimco, May, 20, 2022 (AX) - Kooxda TPLF ayaa sheegtay inay xabsiga kasii daysay maxaabiis badan oo kamid ah Ciidamada Itoobiya, kuwaas oo ay sheegtay in lagu qabtay dagaalkii mudada dheer ka socday gobolka Tigray ee u dhaxeeyay TPLF iyo dowladda Itoobiya. Tirada ay sheegayso TPLF inay siidaysay ayaa ah 4,000 oo kamid ah Ciidamada dowladda Itoobiya, balse faahfaahin intaa ka badan kamaysan bixin TPLF. Balse wali ma jiraan warar rasmi ah oo kasoo baxay dhanka dowladda Itoobiya, oo ku saabsan sheegashada TPLF ee ah inay…